Akụkọ - Ihe omuma nke igwe nchara nchara
Dị ka akụrụngwa, igwe anaghị agba nchara waya ntupu nwere ike kere abụọ na ụdị: silk ihuenyo na metal waya ihuenyo. Ihuenyo silk bụ ihuenyo mbụ, a na-agbanwekwa ihuenyo nchara nchara site na ákwà nchara. Igwe anaghị agba nchara ntupu na-bụ-eji maka echetakwa na nzacha n'okpuru acid na alkali ọnọdụ, n'ihi na apịtị ihuenyo na mmanụ ala ụlọ ọrụ, maka ihuenyo na ihuenyo na chemical eriri ụlọ ọrụ, maka pickling ihuenyo na electroplating ụlọ ọrụ, na maka gas na mmiri mmiri filtration na ndị ọzọ na mgbasa ozi nkewa. N'ozuzu, igwe anaghị agba nchara waya waya, nickel waya na waya ọla eji eji dị ka ihe. E nwere ụdị ịkpa akwa ise dị iche iche: ịkpa akwa nke ọnye, nke ejiri okpukpu abụọ, nke ndị Dutch pụtara, nke ndị a na-asụ nke Dutch na nke Dutch. Anping County nwere ọtụtụ afọ nke silk ihuenyo mmepụta ahụmahụ, nwere ọtụtụ nke igwe anaghị agba nchara ntupu mmepụta ụlọ ọrụ, na mmepụta nke igwe anaghị agba nchara ntupu nyo arụmọrụ bụ mụ, ezi na ndị ọzọ e ji mara. Anyị nwekwara ike ịmepụta ma rụpụta ụdị ngwaahịa ntanetị anaghị agba nchara dịka mkpa ndị ọrụ si dị. Taa, m ga-achọ ịme ụfọdụ ụdị igwe anaghị agba nchara.
E nwere ụdị ụzọ ịkpa akwa ise dị ụgbụ ụgbụ ise: larịị dị larịị, nke ejiri okpukpu abụọ, nke Dutch a na-acha nke ọma, nke a na-eme nke Dutch na nke a na-akpọ nke Dutch.
1. Plain igwe anaghị agba nchara ntupu:
Ọ bụ ihe kasị ịkpa ákwà usoro, ndị isi mma bụ otu njupụta nke ogologo ahihia na weft yarn dayameta.
2. Igwe anaghị agba nchara square ntupu
Igwe anaghị agba nchara square ntupu adabara mmanụ ala, chemical, chemical eriri, roba, taya n'ichepụta, nkà mmụta banyere ígwè, na nkà mmụta ọgwụ, nri na ndị ọzọ ọrụ. Igwe anaghị agba nchara waya kpara n'ime dị iche iche nkọwa nke ntupu na ákwà, nke nwere ezigbo acid, alkali, elu okpomọkụ na-eguzogide, ike ọdụdọ na-eyi ndị na-eguzogide.
3. Igwe anaghị agba nchara ntupu
Ihe: igwe anaghị agba nchara waya ịkpa ákwà: larịị kpara igwe anaghị agba nchara ok ntupu, twill kpara igwe anaghị agba nchara ok ntupu, achara ifuru kpara igwe anaghị agba nchara akwa ntupu, iche kpara igwe anaghị agba nchara ok ntupu. Performance: arụmọrụ na mma filtration arụmọrụ. Ngwa: eji na aerospace, mmanụ ala, chemical na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Factorylọ ọrụ anyị nwere ike ịmepụta ma mepụta ụdị ngwaahịa dị iche iche dị ka mkpa ndị ọrụ si dị
Nkọwa nke igwe anaghị agba nchara bụ 20 mesh - 630 mesh
Akụrụngwa bụ SUS304, SUS316, SUS316L, SUS302, wdg.
Ngwa: eji maka echetakwa na nzacha na acid na alkali gburugburu ebe obibi, dị ka apịtị ihuenyo na mmanụ ala ụlọ ọrụ, na ihuenyo nyo ihuenyo na chemical eriri ụlọ ọrụ, na pickling net na electroplating ụlọ ọrụ
A na-eji ụgbụ ụgbụ nke ụgbụgbọ mmiri mee ụgbụ ụgbụ, isi bụ akwa nza, etiti abụọ dị larịị bụ ihe nduzi, akwa abụọ dị elu bụ akwa nkwado, uru nzacha kacha nta nke ụgbụ nsị bụ 1 micron.
Ntụ ntụ na-emegharị
Powder sintering, makwaara dị ka porous filtration, nwere elu nsogbu amị karịa waya ntupu sintering, na ya filtration ziri ezi bụ obere. Opekempe uru nzacha nwere ike iru 0.45 μ M
Igwe anaghị agba nchara ntupu ihe: igwe anaghị agba nchara ntupu waya, nickel waya, ọla waya. A na-ejikarị ya eme ihe maka ikuku na mmiri na mmiri na nkewa nke mgbasa ozi ndị ọzọ.
Igwe anaghị agba nchara na-eguzogide okpomọkụ, acid, corrosion na-eyi. N'ihi njirimara ndị a, a na-ejikarị waya waya igwe anaghị ata nchara, chemical, nri, ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ọrụ gas gasị, Igwe anaghị agba nchara Myọcha, Automotive Myọcha, Igwe anaghị agba nchara ikuku filtration, Ihe nzacha mmiri, Air Nzacha,